musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Sunny Seychelles Inogashira Kudzoka New Air France Flight
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Seychelles inogamuchira zvakare Air France
Yachirukwa nemvura yechinyakare payaimhara paSeychelles International Airport, ndege yenyika yeFrance, Air France, yakagamuchirwa noushamwari pakudzoka kwayo kunyika yechitsuwa mangwanani eSvondo, Gumiguru 24, 2021, mushure memwedzi gumi nemasere. hiatus.
Nhumwa dzevanoremekedzwa veSeychelles dzakatambira kudzoka kweAir France kurudzi rwechitsuwa.
Seychelles yakabviswa kubva kuFrance runyorwa rutsvuku, uye izvi zvinotarisirwa kuwedzera vashanyi vanosvika.
Zvichabatsirawo kuvandudza kugara kwevanhu kwete mumahotera chete, asiwo mudzimba diki dzevaenzi nenzvimbo dzekuzvidyira uye kuunza vashanyi vazhinji kuPraslin, La Digue, uye zvimwe zvitsuwa.
Vaenzi mazana maviri nevatatu vaibhururuka kubva kuFrance mundege iyi yekutanga vakaravira mutsa wecreole sezvo vakagamuchira zviyeuchidzo zvemuno kubva Dhipatimendi reKushanya uye ndakasangana nemweya unorarama weSeychellois kuburikidza nemimhanzi yechinyakare.
Kurangarira kudzoka kwekubatana kwakananga kwenyika yechitsuwa kune imwe yemisika yayo yakakosha yechinyakare, uye yeSeychelles ichiiswa pane yakabvumidzwa "Liste Orange" yevafambi veFrance, nhumwa inosanganisira Gurukota rezvekunze uye Tourism, VaSylvestre. Radegonde; Mumiriri weFrance, Changamire Dominique Mas; Munyori mukuru wezvekushanyirwa kwenyika, Amai Sherin Francis; uye Director General for Destination Marketing, Mai Bernadette Willemin vaivapo kuti vagamuchire vasvika.
Amai Willemin vakataura kuti kubviswa kweSeychelles kubva kuFrance runyoro rutsvuku uye kudzoka kweAir France hakungotarisirwe kuwedzera vashanyi vanosvika, zvichabatsira kuvandudza kugara kwevanhu kwete mumahotera chete, asiwo mudzimba diki dzevaenzi uye nzvimbo dzekuzvidyira uye. unza vashanyi vakawanda kuPraslin, La Digue, uye zvimwe zvitsuwa.
"Kuva neAir France kudzoka kumahombekombe edu inguva yakanaka kwatiri kuenda. France inoramba iri musika uri kutiitira zvakanaka kunyangwe kushomeka kwendege dzakananga uye chokwadi chekuti isu takanga tiri parunyorwa rutsvuku. Nekuwanikwa kwendege yakananga kuSeychelles kubva nhasi, tiri kufanotaura kuti musika weFrance haungoite zvakanaka maererano nevashanyi vanosvika asiwo nekuwanazve nzvimbo yavo mumisika mitatu yepamusoro. "
Maonero akanaka, Mai Willemin vakadaro. "Tinofara kuti ndege nhanhatu dzekutanga dzinotarisira kutakurwa kwevanhu vakazara uye nemishumo kubva kune vatinoshanda navo vekuFrance vanofamba navo, avo vakawedzera kusimudzira kwavanoenda, kuti kubhuka kwavo kuenda kuSeychelles kune hutano uye kutaridzika kwakanaka. Vafambisi vedu vekushanya munharaunda, kunyanya nzvimbo diki uye pane zvitsuwa zvisiri Mahé, vasuwa vaenzi vedu vekuFrance uye vachafara kuvagamuchira zvakare. "
Ambassador Dominique Mas akataura kuti kuve nekubatana kwakananga kuchabatsira kurerutsa rwendo rwevafambi kuenda kuSeychelles.
"Kuvandudzwa kwemamiriro ehutsanana munyika mbiri idzi kwakabatsira mukutangazve nzendo pakati peFrance neSeychelles. Sarudzo yekuisa Seychelles pa 'orenji runyorwa' uye kusvika kweAir France nhasi inodzokorora chivimbo chehurumende mbiri mukushanda kwakanaka kwematanho adzo ekuchengetedza. Isu tinofara kuve nendege yakananga kudzoka kubva kuParis Charles De Gaulle airport sezvo zvave nyore kuti vafambi vekuFrance vasvike Seychelles, "akadaro Mumiriri weFrance.
Seychelles, iyo yakadzokera kumitambo yekusimudzira yemuviri munaGunyana, ichangobva kutora chikamu pa2021 IFTM Top Resa kuratidzwa, imwe yemitambo mikuru yekutengeserana yepasirese yakatsaurirwa kushanya muFrance, Mai Willemin vakadaro. "IFTM Top Resa chaive chiitiko chinovimbisa kwatiri sezvo takaona kufarira kwataizoenda ndokutibvumira kuwedzera kuoneka kwedu munhau muFrance."
Seychelles yakanyora 43,297 vashanyi vanobva kuFrance muna 2019, zvichiita kuti ive yechipiri musika wepamusoro wegore iro. Parizvino muna 2021, vashanyi zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi maviri kubva kuFrance vakaenda kuzvitsuwa. Nekudzoka kweAir France, maSeychelles ave kushandiswa nendege gumi neimwe.